Reer Bosaaso oo dhexda u xidhay inay U gurmadaan dadkii ka bad baaday Qaraxii Bosaaso ka dhacay | maakhir.com
Reer Bosaaso oo dhexda u xidhay inay U gurmadaan dadkii ka bad baaday Qaraxii Bosaaso ka dhacay
Bosaas:- Olole Balaadhan oo looga gol leeyahay sidii wax loogu qaban lahaa dadkii ku wax yeeloobay Qaraxii ka dhacay Magaalada Bosaaso ayaa ka bilawday Gudaha Magaalada Bosaaso, dhamaan Ganacsatada iyo Culumo”awdiin ayaa hawshaasi dhexda u xidhay.
Hawshaa Dad waxa loogu Uruurinayo waxa aad uga dhex muuqda Bulshada ku dhaqan Magaalada Bosaaso siiba Culumada iyo Ganacsatada oo iyaga durba bilaabay inay dadkaasi wax ugu deeqaan, Dhamaan Shirkaadka ku yaala Magaalada Bosaaso ayaa sheegay inay dadkaasi si Deg Deg ah wax ugu qoondanayaa.
Shirkadaha hawshaasi ka dhex muuqda waxa ka mid ah Shirkada Is gaarsiinta ee Golis oo iyadu dadkaasi ugu deeqday lacag gaadhaysa ilaa 5000$,waxa arinkaasi cadeeyay Masuuliyiinta Shirkada Golis oo iyagu sheegay in loo baahan yahay inay ku daydaan Shirkadaha kalena.
Yabooha loo ururiyey dadkaasi dhaawaca ah ayaa waxaa ka mid ahaa lacag, daawooyin, dhar , iyadoo dadka dhaawaca qaarkood la seexiyey bannaanka Isbitaalka, kadib, markii ay Sarriirihii Isbitaalka buuxsameen.
Dhanka kale Ururka Bisha Cas ayaa ah ururka aad isna uga dhex muuqda gargaarida dadkaasi loo fidiyay iyada oo shaqaalaha Ururka Bisha Cas ay si mutadawacnimo ah ugu shaqaynayeen Dadkaasi goortii Masiibadu heshay.
Custub ka tirsan Warabaahinta Maakhir.com ayaa lugtab galiyay goobaha lagu daa waynayo dadkaasi qaraxii habeen hore ka badbaaday waxayna ku soo arkeen dad badan oo la il daran Dhibaato ka soo gaadhay qaraxaasi, waxa jira dad ay go”een labada logood kuwaasi oo jeefa Sareeraha Cisbitaalka.
Dhakhaatiirka Cisbitaalka Bander Qaasim ayaa dhexda u xidhay inay Gar Gaar Deg Deg ah u fidiyaan dadkaasi, shaqaalaha Cisbitaalka aya la sheegay inay heegan sare galeen tan iyo wakhtigii loo keenay Qayla dhaanta ah inuu dhacay Qaraxaasi.
« Maamulka Gobolka Bari ayaa sheegay inay qaraxii Bosaaos u qabteen Dad loo xaglinayo inay ka danbeeyeen
Talyaaniga ayaa Xeebaha Dalka Somaliya u soo diray Maraakiibtiisa Dalgaalka »